Olona 100 000 eto Antananarivo sy Toamasina no hisitraka ireo tolotra fototra mikasika ny rano sy ny fanadiovana nohon’ny fanohanan'i Norvezy
UNICEF Madagascar/2020/UN0344334/Abela Ralaivita
ANTANANARIVO, 03 septambra 2020 - Olona 100 000 no kendren’ny tetik'asa ho an’ny vonjy taitra sy fampandrosoana izay ho tanterahan’ny Governemanta Malagasy sy ny UNICEF eo amin'ny sehatry ny rano, fanadiovana sy fidiovana. Izany fandraisan-tanana izany dia tafiditra ao anatin’ny fiatrehan’ny governemanta ny Covid-19. Mba hanohanana io drafitr’asa io dia nanolotra valopy mitentina NOK 10 tapitrisa (1,1 tapitrisa dolara) ny Governemanta Norvezianina. Avy amin’ireo fanohanan’ny UNICEF sy ny Agence Danoise de Développement International (DANIDA) ireo dia fidirana an-tsehatra maro samihafa, izay mikendry ny fampiharana ity tetik'asa ity, no hamaly ny filàna eo no ho eo sy ny filàna maharitra eo amin'ny sehatry ny rano, fahadiovana ary fidiovana. Marihina fa ireo mponina ao amin'ny Kaominina an-tanàn-dehibe eto Antananarivo sy i Toamasina, izay lasibatry ny fihanaky ny COVID-19 no iantefan’izany.
Noho io famatsiam-bola io dia olona 100 000 avy amin'ny tokantrano miisa 20 000 amin'ireo tanàn-dehibe roa ireo no afaka hanamafy ny tohi-belin’izy ireo, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fahazoana rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana.
Ny tsy fahampian'ny fahazoana rano, miaraka amin’ny tsy fisian'ny fomba fidiovana dia loza mitatao lehibe ho an’ny fahasalamana, indrindra ho an’ny ankohonana, ary misy akony mivantana amin'ny sakafon'ny ankizy izany.
“Amin'izao fotoanan'ny hamehana izao, ny Ministera dia manamafy ny maha-zava-dehibe ny fahazoan’ny olon-drehetra rano fisotro madio sy tolotra fototra mikasika ny fidiovana sy fanadiovana. Ny Minisitera dia manolotra fanampiana amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka rehetra, entina miantoka ny fahazoan’ny daholobe rano fisotro madio sy tolotra fototra mifandraika amin’ny fidiovana sy fanadiovana any amin'ireo tanàn-dehibe sy ny faritra ambanivohitra atahorana amin’io valan’aretina Covid-19 io. Ny andraikiny dia manao fanentanana momba ireo fihetsika sakana mikasika ny fidiovana, indrindra ny fanasana tanana amin'ny savony sy ny fampiasana trano fivoahana eny anivon’ireny olona misitraka ny fanampiana eto Antananarivo sy Toamasina ireny, mba hampitsaharana ny fiparitahan’ny aretina, ” araka ny fanazavan’ny Ministry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, Ramatoa Voahary Rakotovelomanantsoa.
Mikasika ny lafin’ny fahazoana rano fisotro madio:
• Olona 100 000 avy amin'ny tokantrano 20.000 (80% eto Antananarivo ary 20% ao Toamasina) no hahazo tapakila "voucher" (ticket) mba hahazoana rano madio fisotro – izay mandrafitra ny 11 isan-jaton’ireo mponina izay tsy mahazo rano fisotro amin'ireo tanàn-dehibe roa ireo.
• Any amin'ny faritra tsy ahitana paompin-drano iombonana dia fiarabe mpitatitra rano roa sy siniben-drano 5m3 miisa 20 no ho ampiasain’ny JIRAMA hiantohana ny famatsian-drano tsy ankiato. Manodidina ny olona 10 000 eo ho eo no hisitraka izany.
• Ho tanterahina eto Antananarivo ny fanarenana fotodrafitrasa momba ny rano mba hanamorana ny fahazoana rano mitohy ho an'ny olona fanampiny miisa 5 000.
Mikasika ny lafin’ny fanadiovana sy fidiovana:
• Sekoly 05, tobim-pahasalamana 05 ary tsena 05 no hahazo trano fivoahana manaja ny tontolo iainana ho an'ny daholobe. Ho hita amin’izany ny fitantanana ny fotaka vidanza lava-piringa mba hiantohana tontolo mahasalama ho an'ny mpianatra, ny marary ary ny mponina.
• Hisy trano fivoahana ekolojika izay ho atsangana eny amin’ny tokantrano 312.
• Hisy fanampiana izay hatolotra ny Kaominin'Antananarivo Renivohitra sy ny sampandraharaha misahana ny fikojana an'Antananarivo (SAMVA) mba hiantohana ny fanangonana sy ny fikarakarana ireo fako.
"Ny fahazoan’ny mponina ireo tolotra tsy ankitsahatra mikasika ny rano fisotro madio, toerana fivoahana sy fitaovana fidiovana toy ny savony dia tsy tokony hoheverina ho rendrarendra intsony", hoy i Michel Saint-Lot, solontenan'ny UNICEF eto Madagascar. “Ny fandraisan'anjaran'ny mpiara-miombon'antoka rehetra amin'ny fanohanana ny Governemanta Malagasy dia tena ilaina tokoa, indrindra amin’izao fotoanan’ny valan’aretina coronavirus izay tsy mbola nisy toa azy izao ity. Ny UNICEF dia hilofo hatrany mba hahazoan’ireo ankizy rehetra eto Madagascar sy ny fianakaviany ireo tolotra," hoy ihany izy.
Ny tetik’asa dia ho tanterahina mandritra ny 12 volana miaraka amin'ny fomba fiasa eny ifotony miainga amin’ny ambaratongan'ny mponina eny an-toerana, ka anisan’izany indrindra indrindra ny sehatra tsy miankina sy ireo tanora.
"Ity drafitr’asa momba ny vonjy taitra ity dia mifanaraka amin'ny politikan'ny Norvezy mikasika ny fanampiana ara-pahasalamana. Tafiditra ao anatin’ny fiatrehana ny valan’aretina coronavirus ankehitriny izany, ary antenainay fa ity fidirana an-tsehatra ity dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fahafahan’ny mponina izay kendrena hanohitra ny Covid-19, " araka ny hevitr’i Andreas Danevad, Minisitra - Mpanolotsaina ao amin'ny Masoivoho Norveziana eto Madagasikara. "Ankoatra ireo fiantraikany tsara izay andrasana, ny mponina ao an-toerana dia handray soa hatrany amin'ireo fantsakan-drano sy ny fotodrafitrasa fanadiovana izay hapetraka ivelan’ity asa ity," hoy izy teo am-pamaranana.